China pabrik Metal Fabrication orinasa sy mpanamboatra | Dongtai
Ny fanamboarana vy vita amin'ny vy dia sokajiana ny dingana vita amin'ny famokarana izay mamolavola tapa-vy amin'ny ampahany maniry ao amin'ny alàlan'ny fanesorana materialy sy / na fanovana materialy. Vy akorandriaka izay miasa tahaka nyworkpiece amin'ireo dingana ireo, dia iray amin'ireo endrika mahazatra indrindra amin'ny akora tahiry. Ny hatevin'ny fitaovana izay manasokajy aworkpiecesatria ny vy vy dia tsy voafaritra mazava. Na izany aza, ny vy metaly amin'ny ankapobeny dia heverina ho singa stock anelanelan'ny 0.006 sy 0.25 santimetatra. Ny metaly somary matevina kokoa dia heverina ho "foil" ary ny matevina dia antsoina hoe "lovia". Ny hatevin'ny takelaka vy iray dia matetika antsoina hoe refy azy, isa iray matetika manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 38. Ny refy avo kokoa dia manondro sombin-taratasy matevina, miaraka amin'ny refy marina miankina amin'ny fitaovana. Ny tahiry metaly Sheet dia misy amin'ny fitaovana maro isan-karazany,izay misy ireto manaraka ireto:
Ny vy vita amin'ny vy dia mety ho tapaka, miondrika ary ahinjitra amin'ny endrika rehetra. Ny dingana fanesorana ny lamba dia afaka mamorona lavaka sy fahatapahana amin'ny endriny geometrika 2D. Ny dikan'ny fanovàna dia afaka miondrika imbetsaka amin'ny zoro samihafa na maninjitra ny takeloa hamoronana fehezana sarotra. Ny haben'ny takelaka vy amin'ny habe dia afaka manomboka avy amin'ny mpanasa na bracket kely, hametahana lamba ho an'ny fitaovana an-trano, mankany amin'ny elatry ny fiaramanidina lehibe. Ireo singa ireo dia hita ao amin'ireo orinasa isan-karazany, toy ny fiaramanidina, otomotiko, fananganana, vokatra mpanjifa, HVAC, ary fanaka.
Ny dingana vita amin'ny lamba vita amin'ny vy dia afaka apetraka amin'ny sokajy roa - mamorona sy manapaka. Ny fizotran-javatra namorona dia ireo izay mahatonga ny hery ampiharina mahatonga ny fitaovana hamadika plastically, fa tsy hahomby. Ny dingana toy izany dia afaka miondrika na mamatotra ny takelaka amin'ny endrika irina. Ny dingana tapaka dia ireo izay mahatonga ny hery ampiharina mahatonga ny fitaovana tsy mahomby sy misaraka, mamela ireo fitaovana hotapahina na esorina. Ny ankamaroan'ny dingana manapaka dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiasan-kery lehibe ampy hanasaraka ny fitaovana, ary izany no iantsoana indraindray ho toy ny fanarenana. Ny dingana fanodinana hafa dia manala fitaovana amin'ny alàlan'ny fampiasana hafanana na fanalan-jaza, fa tsy hery famokarana.
• Famolavolana fihodinana
• Fanaovana Kofehy
• Misintona lalina
• Famoronana matevina
• Manapaka amin'ny fanorana
• Manapaka tsy manety
• Famafana vita amin'ny varatra
• Fanapahana Plasma
• Ny fanapahana rano amin'ny rano
Previous: Fanamarihana fiasana
Manaraka: Serivisy fanamboarana & fanenomana